Matipi Ekutenga Simba Mawiricheya - Mazano Ekutenga Magetsi
Kana iwe uri kufunga nezve kutenga simba wiricheya kana dzimwe nguva inonzi magetsi wiricheya, pane zvakawanda zvingasarudzwa pamusika. Idzo sarudzo dzinosanganisira yepakati vhiri dhiraivha, kufamba, kupeta uye basa rinorema magetsi emagetsi.
Pane zvinhu zvinoverengeka zvinoda kutariswa pakusarudza mhando yakanaka ye wiricheya kune mumwe mushandisi.
Zvinhu zvinotevera zvinoda kutariswa pakutenga magetsi wiricheya:
1. Chii chako uremu uye chii huremu huremu hweiyo wiricheya urikufunga?
Kana iwe uchirema padhuze ne300 lbs hazvikurudzirwe kutenga simba wiricheya iine 300 lb chinzvimbo. Semuenzaniso kana huremu hwako hwakatenderedza mazana maviri emalbs, iwe unofanirwa kuenda nechigaro chesimba pane chinokwana mazana maviri nemakumi mashanu emazana kana mazana matatu. Zvichienderana nehuremu hwako une mukana weyakajairwa kana basa rinorema zvemagetsi wiricheya.
2. Uchavepi kushandisa magetsi wiricheya kazhinji?
Uchave kushandisa iri mukati, kunze kana zvese zviri zviviri? Iwe une sarudzo dzakawanda dzaungasarudza kubva pasimba mavhiripu iyo inogona kushandiswa mukati nekunze. Simba rakawanda mavhiripu zvakagadzirirwa kushandiswa zvese mukati nekunze.
3. Unoronga pakutakura simba wiricheya kazhinji?
Kana iwe ukaronga pakufamba zvishoma nesimba rako wiricheya, iwe ungangoda kufunga zvakapetwa kana kufamba kunoitwa mota wiricheya. Kufamba kukuru kukuru mavhiripu ndiwo maMerit EZ Go uye Pride's Go macheya akareruka uye akakosha kana uchifamba.
4. Ndechipi chigaro chegaro chakanyanya kugarika kwauri?
Chimwe chezvinhu zvikuru pakusarudza danho rako rerunyararo mune yako nyowani wiricheya is chigaro upamhi. Ive neshuwa yekushandisa yakakodzera yekuyera gwara kana iwe uri kufunga nezve kutenga sikuta kana simba wiricheya.
Heano akati wandei matipi ekutora mukufunga kana uchitenga simba wiricheya. Kutenga simba wiricheya imari hombe, saka zvichipiwa kuti mari yemidziyo inobatanidzwa, vashandisi vanofanirwa kuve nechokwadi kuti vari kutenga chigaro chemagetsi chakanyanya kukodzera pane zvavanoda. Nenzira iyo iwe unodzivirira kutemwa nemusoro uye zvisina kufanira kudzoreredza fizi.